विभागदेखि अस्पतालसम्म दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व हेरफेर, पहिलोपटक गैरचिकित्सककाे जिम्मामा विभाग – Health Post Nepal
२०७६ फागुन ८ गते २०:१२
सरकारले आफूमातहतका दर्जनभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। बिहीबार स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकसहित तीन महाशाखा, पाँच केन्द्र र पाँच अस्पतालमा नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो। अधिकांश सरुवा तथा नियुक्तिमा कार्यसम्पादन र क्षमतालाई भन्दा राजनीतिक आस्था, पहुँच र नातागत सम्बन्धले नै प्राथमिकता पाएको देखिएको छ।
विभागको महानिर्देशकमा सम्भवतः पहिलोपटक गैरचिकित्सक
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । महानिर्देशकका लागि स्वास्थ्य सेवाको १२औँ तहमा कार्यरत प्रमुख विशेषज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपछि श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निमत्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालय गत भदौमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलको सेवानिवृत्तिपछि प्रमुख विशेषज्ञविहीन छ ।
विभागको नेतृत्व सम्भवतः पहिलोपटक गैरचिकित्सकको हातमा गएको छ । यसअघि चिकित्सकमध्येबाटै महानिर्देशक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । स्वास्थ्यमान्त्री भानुभक्त ढकालले गरेको यो प्रयोग अव्यावहारिक मात्र नभई गैरकानुनीसमेत भएको चिकित्सक नेताहरूको भनाइ छ ।
विभागको नेतृत्व गैरचिकित्सक कर्मचारीले गर्दा अनेक व्यावहारिक समस्या आउने पूर्वमहानिर्देशक तथा सेवानिवृत्त प्रमुखविशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् । यसले कर्मचारीबीच तारतम्य मिलाउनै गाह्रो हुने र एकले अर्कोलाई नटेर्ने आवस्था सिर्जना भई विभागको काम नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले थाहा पाएसम्म अहिलेसम्म गैरचिकित्सक महानिर्देशक भएको छैन,’ डा. प्याकुरेलले हेल्थपोस्टसित भने, ‘यसले एकातिर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ भने अर्कोतर्फ एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ ।’ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाका कारण सैद्धान्तिक रूपमा माने पनि व्यावहारिक रूपमा गैरचिकित्सक महानिर्देशकलाई स्विकार्न समान तहका चिकित्सक कर्मचारी तथा आमचिकित्सकलाई समस्या हुने अनुमान उनको छ ।
यद्यपि, १२औँ तह बढुवापछि पूर्णमहानिर्देशक बनाएको भए समस्या केही हदसम्म मिल्न सक्ने उनको भनाइ छ । विभागमा महानिर्देशकबाहेक अरु पद १२औँ तहको नहुने हुँदा एकले अर्कोलाई नटेर्ने समस्या न्यूनीकरण हुने उनको बुझाइ छ ।
अहिले त कस्तो परेको छ भने ११औँ तह बढुवा हुँदा श्रेष्ठभन्दा सिनियर डा. भीमसिंह तिंकरी विभागअन्तर्गत नै परिवारकल्याण महाशाखामा कार्यरत छन् । अब डा. तिंकरीले श्रेष्ठको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ ।
स्वास्थ्यसेवामा बहाल रहेका ११औँ तहका विशेषज्ञमध्ये डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. रोशन पोखरेल, डा. तिंकरी नवनियुक्त महानिर्देशक श्रेष्ठभन्दा सिनियर छन् । विभागको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु नै परे पनि डा. सिंह वा विभागमातहत नै कार्यरत डा. तिंकरीलाई जिम्मेवारी दिइएको भए व्यावहारिक समस्या नआउने अवस्था थियो । तर, मन्त्री ढकालले नौलो प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) पनि विभागमा गैरचिकित्सकको नेतृत्व स्विकार्ने पक्षमा देखिएको छैन । निवर्तमान बन्ने तरखरमा रहेका एनएमए अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले हेल्थपोस्टलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘विभागमा गैरचिकित्सकको नेतृत्व अव्यावहारिक मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ ।’
विभागअन्तर्गतका केही तालिम, सूचना, पुनःस्थापनालगायत केही कार्यलयमा मात्र गैरचिकित्सकको नेतृत्व हुन सक्ने कार्यविधि नै रहेको डा. श्रेष्ठले बताए । यसले समग्र चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाउने उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि र समझदारीविपरीत गैरचिकित्सकलाई महानिर्देशक बनाउने मन्त्रालयको निर्णयले हाम्रो जुन परम्परामा आँच आएको छ,’ उनले भने, ‘अब चिकित्सकले पनि मर्यादा कायम राख्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
एनएमएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले गैरकानुनी रूपमा गैरचिकित्सकलाई महानिर्देशक बनाइएको हो भने त्यसको संघले विरोध गर्ने बताए ।
श्रेष्ठ यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए । उनी स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका ११औँ तहका विशेषज्ञ हुन् र १२औँ तह बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।
यसअघिका निमित्तमहानिर्देशक डा. रोशन पोखरेल मन्त्रालयमा तानिएका छन् । उनी गत भदौ अन्तिम साता निमित्तमहानिर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
मन्त्रालयमा १२औँ तहका ३ वटै दरबन्दी खाली छन् । प्रमुख विशेषज्ञ बढुवाका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरिए पनि नियुक्ति दिइएको छन् । सिफारिस नाममध्ये भर्खरै विभागबाट तानिएका डा. पोखरेल पहिलो नम्बरमा छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवामा उनको अंक सबैभन्दा बढी छ । नवनियुक्त महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि प्रमुख विशेषज्ञ बढुवा सिफारिसमा पाँचभित्र छन् ।
३ महाशाखाको जिम्मेवारी हेरफेर : नीति योजनामा डा. लोहनी, डा. देवकोटालाई समन्वय, इपिडिमियोलोजीमा डा. वासुदेव
मन्त्रालयले नीति तथा योजना महाशाखाको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ । महाशाखाको जिम्मेवारी डा. गुणराज लोहनीलाई दिइएको छ । उनी केही समयअघि मात्र कोसी अस्पतालबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।
यसअघि योजना महाशाखा सम्हालिरहेका डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा सरुवा गरिएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको जिम्मेवारी डा. वासुदेव पाण्डेले पाएका छन् । यसअघि उनी टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । यसअघि महाशाखाको नेतृत्व डा. विवेकलाल कर्णले सम्हाल्दै आएका थिए ।
५ केन्द्रको जिम्मेवारी हेरफेर : डा. कर्ण क्षयरोगमा
मन्त्रालयले ५ वटा केन्द्रको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकमा डा. विवेकलाल कर्णलाई पठाइएको छ । यसअघि उनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा थिए ।
राष्ट्रिय यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको जिम्मेवारी डा. रमेश खरेलले पाएका छन् । यसअघि उनी सार्क क्षयरोग केन्द्रमा थिए ।
त्यस्तै, सार्क क्षयरोग केन्द्रमा डा. अनुज भट्टचनलाई ल्याइएको छ । उनी यसअघि यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमा थिए ।
स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको जिम्मेवारी डा. यदुचन्द्र घिमिरेले पाएका छन् भने टीकजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको जिम्मेवारी मोहमद दाउदलाई दिइएको छ ।
५ अस्पतालको नेतृत्व फेरियो : कान्तिबाट डा. बिच्छा हटाइए
बिहीबार नै सरकारले ठूला ५ अस्पतालको नेतृत्व हेरफेर गरेको छ । कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका निर्देशक डा. आरपी बिच्छालाई कान्तिमै राखिएको छ ।
डा. बिच्छा गत साउनमा निर्देशक बनेका थिए । उनले छोटो अवसरमै कान्तिमा आमूल सुधार ल्याएको सर्वसाधारणले नै अनुभूत गरेका थिए । अस्पतालमा सेवाविस्तारदेखि गुणस्तर विकाससम्ममा उनी लागिरहेका थिए ।
टेकु अस्पतालको निर्देशकमा यसअघि क्षयरोग केन्द्रमा रहेका डा. सागर भण्डारीलाई ल्याइएको छ । त्यसैगरी, भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा डा. प्रकाश थापा र कोसी अस्पतालमा डा. चुम्बनलाल दासलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डा. रवीन खड्का वीर अस्पतालको उपनिर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।